Sale Promoter Archives - Glory Assumption Space
1.Sales Assistant – Female (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀~၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /လှိုင်သာယာမြို့ နယ်။
Salary Rang : 300000 - 400000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Sales Assistant – Female (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀~၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) /လှိုင်သာယာမြို့ နယ်။ - ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည် ။ - အသက် (၂၅) နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ - English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Computer Word , Excel , internet&Email ရရမည်။ - Sales Assistant လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ - နိုင်ငံခြားသားနှင့်လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00AM to 6:00PM) - စနေ,တနင်္ဂနွေ နှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ - Ferry စီစဉ်ပေးသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09977397705, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Assistant - Female (10) Posts
Salary Rang : 200000-250000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Aluminium Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Assistant - Female (10) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ •	Construction Site များသို့သွားရောက်နိုင်ရမည်။ •	Bus Car စီးနိုင်ရမည်။ •	အလူမီနီယံတွင် အတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:30 PM ) •	သမိုင်းလမ်းဆုံထိ ဖယ်ရီရှိသည်။ ယူနီဖောင်းရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ် မူတည်၍လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101 , 09262223785 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Assistant - Female - (5) Posts
Salary Rang : 120000
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Assistant - Female - (5) Posts / လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်+အခြားခံစားခွင့်များ / ရန်ကင်းမြို့နယ်။ - ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ - အရောင်းပိုင်း အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - မတ်တပ်ရပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (10:00 AM – 7:00 PM)။ - ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ( မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Assistant - Female - (5) Posts / လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ်+အခြားခံစားခွင့်များ / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။
- ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းရမည်။ - အရောင်းပိုင်း အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - မတ်တပ်ရပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် (9:00 AM – 9:00 PM)။ - ယူနီဖောင်းရှိသည်။
( မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_2733" align="alignnone" width="300"] Portrait ofayoung attractive business woman.[/caption]
Sale Assistant - Male (5 Posts)
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ တပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.	Sales Assistant – Male (5 Posts) / လစာ - ၁၂၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) •	Age from 20 to 24 •	Know the way around the Yangon •	Can carry and arrange products cartons •	Keep and record document •	Right Attendance and polite, dress well •	Hard-working •	Delivery order everyday with Car and Senior Sale •	Any related tasks မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09-263121101,09- 262223785 , 09 977397705, 09 262555438,, 09262223784 Viber Phone Number – 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Sales Assistant – Male /Female (5)Posts
Location in : Kyauk Myaung
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Assistant – Male /Female (5)Posts / Salary – 150,000 Kyats +++/Kyautmyaung Township - အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင် ဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Promotor - Female (10)Posts
Location in : North Oakkalar
*****************************Ugarent Requirement******************************* 1. Sales Promoter Female (10) Posts / Salary – 150,000 Kyats/ Okkalapa Township . -(၁၀)တန်းအောင် (သို့) တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ရှိရမည်။ -အပြောအဆိုသွက်လက်ပြီး Customer နှင့် ဆက်ဆံပြောဆိုရာတွင် ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။ -အသက် ၂၀ မှ ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Promoter ( Cosmetic) - Female (10) Posts
Location in : Lanmataw
Salary Rang : 150000 - 180000
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post (အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် Plazza အတွက်ဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိပါသည်) 1.	Sales Promoter ( Cosmetic) - Female (10) Posts / Salary 150000 ++++ Kyats /Lanmadaw Township Requirements -	ဆယ်တန်းအောင်ရပါမည်။ -	မနက် ၉နာရီ မှ ည ၉နာရီ အထိအလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ -	အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ -	ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး သွက်လက်ထက်မြတ် ၍လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ -	အသက် (၁၉ )နှစ် မှ (၂၅) နှစ်အတွင်းသာဖြစ်ရပါမည်။ -	မှတ်ပုံတင်ရှိရပါမည်။ -	Lanmadaw မြို့နယ်တွင် အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် Plazza တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။ -	Uniform စီစဉ်ပေးပါမည်။ -	တစ်လ ၄ရက်ပိတ်ပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No – 09-263256668,09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ ) [caption id="attachment_368" align="alignnone" width="4000"] Jobs Hailer ingJob Ads Recruitment And Vacancies[/caption]
Sales Promoter(Supermarket) - Female (7) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1. Sales Promoter (Supermarket) - Female (7) Posts / Salary 150000 ++++ Kyats /Lanmadaw Township Requirements - ဆယ်တန်းအောင်ရပါမည်။ - မနက် ၉နာရီ မှ ည ၉နာရီ အထိအလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။ - အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ - ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး သွက်လက်ထက်မြတ် ၍လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ - အသက် (၁၉ )နှစ် မှ (၂၅) နှစ်အတွင်းသာဖြစ်ရပါမည်။ - မှတ်ပုံတင်ရှိရပါမည်။ - Lanmadaw မြို့နယ်တွင် အသစ်ဖွင့်လှစ်မည့် City Mark များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No – 09-263256668,09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sale Promoter -female (25)Posts
- ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - စကားပြောပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -ရန်ကုန်မြို့နယ်အတွင်း မည်သည့်နေရာတွင်မဆို တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
<<<<<<<<<<<<<<< “ URGENT POSITION ”>>>>>>>>>>>>>>>>> Yangon မြို့ ရှိ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် အနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသော GAS Agent နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကုမ္မဏီ ကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဝန်ထမ်းများ အမြန် အလိုရှိနေပါသည်။ 1.	Sales Girl	Female (10) Posts -	၁၀ တန်းအောင်။ -	အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ -	လစာ ၁ သိန်း+++ Email ဖြင့်၎င်း၊ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com Phone No.- 09 262223783, 09 970539386,09 262555438, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
1.	Sales Staff, Male or Female
Location in : ဗိုလ်တထောင်
ဆယ်တန်းအောင် ( သို့ ) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူများ ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။ အဖွဲ့ အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com
Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101
ရုံးလိပ်စာ - တိုက်အမှတ်(၆) ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၄)၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
[caption id="attachment_354" align="alignnone" width="600"] A business man is looking down at his feet withared race line that says start here to representajourney,[/caption]
**ထူးချွန်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရောက်လာပြန်ပါပြီ** မင်္ဂလာတောင်ညွန့် တွင်ရှိသော GASနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးတစ်ခုတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအလိုရှိသည်။ 1. Sals Girl, Female ( 20 posts ) Cosmetic ရောင်းပေးရမည်။ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ အသက် ၂၅ နှစ်အောက် ဖြစ်ရမည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် ၂ ပတ်သွားရောက်ပြီး အရောင်းပိုင်းသင်တန်းတက်ရမည်။ ထူးချွန်ပါက ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလုပ်လုပ်ရမည်။ Interview ချက်ချင်းဝင်ရမည်။
E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone No.- 09 262223784, 09 977125251,09 262555438, 09 263121101 ရုံးလိပ်စာ - တိုက်အမှတ်(၆) ၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၄)၊ အင်ကြင်းမြိုင်အိမ်ရာ ၊ ဗိုလ်ချို(၁)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
Sale & Marketing Assistance (2-Posts)
Sales Assistant (M/F) 1-Post
-Any Graduate -Experience2years -စကားပြောသွက်လက်ရ်ျ ရုပ်ရည်ချောမောပြေပြစ်ရမည်။